नेपालीहरुलाई खुसी पार्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गरे यस्तो प्रतिबद्धता, राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी समेत दंग — Imandarmedia.com
१सेवा बन्द, नगरप्रमुख किसान गुरुङलाई संक्रमण देखिएपछि
२सकियो शुरु नै नभई मनाङको शैक्षिक सत्र
३राजकुमार घिमिरेको गिरफ्तारी बिरुद्ध चौतर्फी बिरोध, तत्काल रिहा गर्न माग
४चिनियाँको खानपान : रैथाने शैली र पश्चिमीकरणको प्रभाव, कति बेला कसरि सुन बेला ?
५चार महिनामा ४ खर्बको वस्तु आयात, ४० अर्बको मात्र निर्यात
६कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टरको दुखद मृत्यु, शोकमा डुब्यो तेह्रथुम
७आज सुनको भाउ ह्वात्तै घट्यो, नेपाली बजारमा कतिमा हुदैछ कारोबार ?
८काठमाडाैँ उपत्यकामा थपिए ९४७ कोरोना संक्रमित, हेर्नुहाेस् कहा कति
९२४ घण्टामा देशभर कुन जिल्लामा कति थपिए कोरोना सन्क्रमित ? विवरणसहित
१०बैतडीमा जिप दुर्घटना: ५ को मृत्यु, ४ घाइते
११वीर अस्पतालमा न्याम्सका पदाधिकारी प्रवेशमा रोक
१२क्रिकेट खेलाडीको पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरियो
१Rare ‘blue moon’ to enchant Halloween stargazers
२US Election 2020: Biden overtakes Trump in Pennsylvania as Georgia heads for recount
३भोलिबाट दैनिक कोरोना प्रेस ब्रिफिङ नहुने, यस्ताे छ कारण
४कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने, शरीरमा आउने अनावश्यक रौंलाई याद गर्नुस् यी ५ कुरामा
६Melbourne Cup 2020: Twilight Payment wins but Anthony Van Dyck is fatally injured
७Coronavirus: US sees record-high daily Covid numbers as election nears
८नेपालमा आज मात्रै यति धेरै कोरोना संक्रमितकाे मृत्यु, कहाँ कति ?
९नेपालमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम, भारतलाई ठुलो झट्का
१०Machu Picchu reopens after eight-month Covid closure
११US Election 2020: Republicans and Democrats battle for control of Congress
१२आज तिहारको चौथो दिन गाई-गोरु र हलीको पूजा गरिँदै,म्हपूजा पनि आजै
नेपालीहरुलाई खुसी पार्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गरे यस्तो प्रतिबद्धता, राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी समेत दंग
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच सोमबार टेलिफोनमार्फत कुराकानी भएको छ । कुराकानीमा क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले कोरोना भाइरस.(कोभिड–१९) विरुद्धको लडाइँमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुराकानीका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले दुवै देशको स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सञ्चार र सहकार्यका लागि पनि आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच एकजुटता र सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि सीले बताएका छन्।
कोरोना संकटसँग जुध्न विश्वले बहुपक्षवादको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र नैतिकतालाई बचाइराख्नु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले औंल्याएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चीनले चालेको कदमको प्रशंसा गरेकी छिन्।
साथै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न देशमा चीनले गरेको सहयोगप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशंसा गरेकी छिन्। जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालले चालेको कदम पनि प्रभावकारी भएको भन्दै प्रशंसा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि नियमित काममा फर्किएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन्। यसैबीच रमजान सुरु भएपछि साउदी सरकारले कर्फ्यू खुकुलो पारेको छ ।
अप्रिल २६ देखि मे १३ सम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कर्फ्यू हटाइएको छ । साउदी सरकारले मक्का क्षेत्र बाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने गरी कर्फ्यूको समयमा हेरफेर गरेको हो । यसअघि रियाद, दमाम, ताबुक, दहरान, हफुफ, ताइफ, कतिफ, अलखोबर र जेद्दाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा २४ घण्टे कर्फ्यू लागू भएको थियो ।
कर्फ्यूको समय फेरबदल भए पनि सामाजिक दूरी कायम राख्न र कर्फ्यूको समयलाई पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । साउदी अरबस्थित नेपाली नेपाली दूतावासले समस्या परे तत्काल सम्पर्क गर्न नेपालीहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
दूतावासले नेपालीका गुनासा सुन्न छुट्टै टेलिफोन सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । दूतावासका अनुसार ०५०००३१७०५ र ०५०००३४७८६ मा फोन गरेर आफ्ना समस्याहरु टिपाउन सकिनेछ ।
फेसबुक, इमेल, ह्वाट्सएपबाट गुनासाहरु पठाउन कठिन भएको गुनासो बढेपछि दुईवटा टेलिफोन नम्बरमा आउने श्रमिकको गुनासो सुनेर व्यवस्थापन प्रकिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।